Enhydro quartz pụtara. Ọla dị ka pendant ma ọ bụ mgbanaka maka ọrịre - vidiyo
Enhydro quartz pụtara na Njirimara. Enwere ike iji enhydro quartz maka ire ya na ọla dị ka pendant ma ọ bụ mgbanaka.
O nwere ihe jupụtara na mmiri jupụtara n'ime kristal ka ọ na-eto. Nkume ndị kachasị dị ọnụ bụ ndị nwere ụfụfụ na-agagharị, ebe enwere akpa ikuku na kristal na enwere ike ịkwaga ntakịrị ụfụ mmiri elu na ala. Enhydro ndị ọzọ nwere ụdị mmiri n'ime ha nke gbara ajọ ndụ na-enweghị agaghari.
Mmanụ mmanụ enzroro quartz
Dịka ị pụrụ ịhụ na foto na vidiyo, kristal a bụ ihe herkimer diamond or quartz mmanụ, si Afghanistan. Ihe niile na - esite na otu ihe dị na m mana ụfọdụ bụ enhydro quartz maka na enwere mmiri na anya a na-ahụ anya na ihe gazị atọ na-aga n'ime kristal.
Enhydro quartz pụtara na atụmatụ ihe atụ
E chebere mmiri dị n’ime kristal ndị a site na mmetọ nke ụdị ụlọ ọrụ mmadụ dị iche iche. Nke a na - eme ka ọ bụrụ ezigbo kristal iji maka ndị na - achọ ịdị ọcha. Bụrụ nke dị ọcha nke uche, anụ ahụ ma ọ bụ mkpụrụ obi. Mmiri a bụ ihe ngosipụta nke ndụ ma nwekwa ọcha niile nke atụmatụ mbụ Chineke. Mmadu nwere ike itughari na mkpu oku nke Enhydro na itinye aka na ijikota na atumatu a. Nkume a na-enye njikọ doro anya na ụzọ Akashic Records.
Iji okwute a rụọ ọrụ dị ezigbo mma maka nhicha na nsacha nke arụrụ arụ dị na ya. Iji kristal a na ụdị elixir na-eme ka ọkwa dị omimi nke ime ka ahụ dị ọcha ma na-arụ ọrụ n'ụzọ ime mmụọ site na ike dị ọcha nke enhydro kristal na-enye.
Enhydro quartz si Afganistan
Anyị na-ere omenala emere Enhydro quartz ọla dị ka pendant ma ọ bụ mgbanaka.